Solène Zavagno notendrena ho mpitantana ankapobeny ny Gravity Media any Frantsa | NAB Show News | 2020 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Vaovao » Solène Zavagno notendrena ho mpitantana ankapobeny ny Gravity Media any Frantsa
Gravity Media, mpamatsy sehatra iraisam-pirenena ny fampitaovana mivantana mivantana mivantana sy ny serivisy famokarana ho an'ny tompona atiny, mpamorona ary mpaninjara, dia nanendry an'i Solène Zavagno ho mpitantana jeneralin'ny orinasany any Frantsa.
Solène dia tompon'andraikitra amin'ny fiasa isan'andro ao amin'ny biraon'i Paris, ao anatin'izany ny fandrindrana ny loharanon-karena, ny fitarihan'ny mpiasa ary ny fitantanana sy ny fitomboana ary ny mpanjifa vaovao. Izy koa dia toerana ifandraisana voalohany any Frantsa ho an'ny faritra hafa ao amin'ny Gravity Media, miantoka ny fahazoan'ny mpanjifa ny herin'ny Gravity foana.
Solène dia niditra tao amin'ny Gravity Media (toy ny Gearhouse Broadcast) tamin'ny 2017 ho mpitantana ny famokarana talohan'ny nanondranana azy ho Lehiben'ny Production & Operations tamin'ny taona 2019. Amin'io anjara asany io dia niahy ny ekipan'ny fitantanana ny tetik'asa ao amin'ny Gravity Media any France izy, manara-maso ny fandaminana sy ny fanolorana lehibe -fifanarahana arak'asa misy ny hetsika fanatanjahantena marobe miaraka amin'ny OBS sy ISB. Nanome toky i Solène fa mandeha am-pilaminana ny tetikasa eo amin'ny sehatra teknika, logistika ary ekipazy. Izy koa dia nandray anjara tamin'ny famoronana fotoana ara-barotra vaovao, ao anatin'izany ny fifanarahana trano ho an'ny Federasiona Française de Tennis, hazakazaka F1H2O, eSports ary hetsika ara-panatanjahantena miaraka amin'ny OBS sy ISB.
Alohan'ny hidirany amin'ny Gravity Media, Solène dia niasa manokana tamin'ny fakantsary an'habakabaka sy manokana. Niasa eran'izao tontolo izao izy tamin'ny doka sy ny famokarana sarimihetsika, ary koa tamin'ny hetsika fanatanjahan-tena kilasy voalohany toy ny Lalao Olaimpika, Lalao Aziatika, tompon-daka amin'ny atletisma eran-tany / eropeana, Tompondaka eran-tany manerantany, rugby enina firenena ary tenisy Open frantsay.
Ed Tischler, Tale mpitantana ny Media Gravity any Angletera sy Eropa, naneho hevitra hoe:
“Faly izahay manambara ny fanendrena an'i Solène ho Tale Jeneralin'ny asa eto Frantsa. Solène dia manana rakitsoratra fahombiazana lava teo amin'ny sehatry ny indostria ary niara-niasa tamin'ny maro tamin'ireo mpanjifanay manan-danja indrindra tamin'ny sasany tamin'ireo famokarana lehibe indrindra sy sarotra indrindra. Manantena izahay fa hanohy hanitatra ny orinasanay any Paris i Solène amin'ny alàlan'ny fanomezana asa bebe kokoa ho an'ireo mpanjifantsika efa lasa ary manampy amin'ny fampidirana ny hery misintona amin'ireo mpanjifa vaovao. ”
Solène Zavagno, tale jeneralin'ny Gravity Media any Frantsa, dia nanampy hoe:
“Faly aho fa voatendry amin'ny anjara asako vaovao. Izahay sy ny ekipa monina ao Paris dia manantena ny hiara-hiasa amin'ireo mpanjifa efa misy sy vaovao amin'ny famokarana sarotra indrindra. ”
Momba ny fampitam-baovao Gravity
Gravity Media dia mpamatsy manerantany amin'ny serivisy fampitaovana mivantana sy ny serivisy famokarana ho an'ireo tompona, mpamorona ary mpizara. Ampiasainay ny fisintonana iraisan'ny firenentsika sy ny loharanon-karena hisamborana, hanamboarana ary hamoronana votoatin'ny sarin'izao tontolo izao izay manome aingam-panahy sy manentana. Ny olona 500 ao aminay dia manompo ny mpanjifa manerana ny indostrian'ny fanatanjahantena, haino aman-jery, vaovao sy fialamboly avy amin'ny toby any UK, Australia, USA, France, Germany ary Qatar.
Gravity Media dia orinasa vaovao iray misy zotra 30 an-taona, hery iray tokony hoheverina ho noforonina tamin'ny alàlan'ny fampivondronana ireo efitrano fampitana vaovao sy trano famokarana efa fantatra: Gearhouse Broadcast, Broadcast HyperActive, Input Media ary Chief Entertainment.
Fantaro bebe kokoa amin'ny gravitymedia.com
fanendrena fampitana Gravity Media fampitàna mivantana famokarana 2020-11-19
Previous: Ny tobin'ny fahitalavitra Hearst dia mampiasa tamba-jotra TVU ho an'ny fampielezana lavitra isan'andro
Next: Telstra dia mandefa ny sehatra Telstra Octagon hanafainganana ny fifanakalozana manerana ny fifanakalozana eraky ny valo